28 Beliefs in Myanmar - Zomi Adventist Innkuan
Seventh-day Adventist 28 beliefs
စနေ အသငြး လို့အမွားက ခစွစြနိုးခေါကြှတဲ့ Seventh-day Adventist အသငြးတောရြဲ့ ယုံခကွြ ၂၈ ခကွြ တဈခုစီကို ကမွြးညှနြးမွားနဲ့ ဗဟုသုတအဖှဈ ဝမွှလေိုကပြါတယြ။ နောကမြှ ခရဈယာနအြမွားစုနဲ့မတူညီပမေဲ့ သမျမာကမွြးစာပေါအြခှခေံတဲ့ ယုံကှညခြကွြ တှကေို ရှေးထုတပြှီး တဈခုခငွြး ပိုကယွပြှနြ့စှာဖောပြှပါမယြ။ Official link _https://www.adventist.org/en/beliefs/
၁။ The Holy Scriptures(သမျမာကမွြးစာ)
? သမျမာကမွြးစာသညြ ဘုရားသခငြ၏အလိုတောကြိုဖောပြှသညြ့ မမှားယှငြးနိုငသြော နှုတတြောထြှကစြကားမွားဖှဈ၍ ခရဈယာနမြွားအတှကြ တဈခုတညြးသော ယုံကှညခြှငြးနဲ့ ကငွြ့ဝတဆြိုငရြာစညြးမဉွြး ဖှဈသညြ။
✔️ ဆာလံ ၁၁၉း၁၀၅၊သုတျတံ ၃ဝး၅၊၆ ဟရှောယ ၈းဝ ယောဟနြ ၁ရး၁ရ ၁သကြ ၂း၁၃ ၂တိ ၃း၁၆၊၁ရ ဟဗှေဲ ၄း၁၂ ၂ပေ ၁း၂ဝ ၂၁။
၂။ The Trinity (သုံးပါးတဈဆူဘုရား)
? ထာဝရဘုရားသညြ ခမညြးတောြ၊ သားတောြ၊ သနြ့ရှငြးသောဝိညာဉတြောတြညြးဟူသော သုံးပါး ပေါငြးတဈဆူ ဘုရားဖှဈတောမြူ၏။
✔️ ကမ်ဘာဦး ၁း၂၆ တရားဟော ၆း၄ ဟရှောယ ၆း၈ မူဲ ၂၈း၁၉ ယောဟနြ ၃း၁၆ ၂ကော ၁း၂၁-၂၂၊၁၃း၁၄ ဧဖကြ ၄း၄-၆ ၁ပေ ၁း၂။
၃။ The Father (ခမညြးတောဘြုရား)
? ခမညြးတောြ ဘုရားသညြ ဖနဆြငြးရှငြ၊ မူလအစ၊အထောကအြမ၊ နှငြ့ အခွုပအြခှာအာဏာပိုငြ ဖှဈသညြ။
✔️ ကမ်ဘာဦး ၁း၁ တရားဟော ၄း၃၅ ဆာလံ ၁၁ဝး၁၊၄ ယောဟနြ ၃း၁၆ ၁၄း၉ ၁ကော ၁၅း၂၈။
၄။ The Son (သားတောဘြုရား)
?သားတောဘြုရားသညြ ခရဈတောအြဖှဈ လူဇာတိကို ခံယူခဲ့သော ဘုရားစငစြဈဖှဈကာ၊ လူစငစြဈလညဖြှဈတောမြူ၏။
✔️ ဟရှော ၅၃း၄-၆ ဒံယလေ ၉း၂၅-၂ရ လုကာ ၁း၃၅ ယဟနြေ ၁း၁-၃။
၅။ The Holy Spirit (သနြ့ရှငြးသောဝိညာဉတြောဘြုရား)
? သနြ့ရှငြးတောဝြိညာဉတြောဘြုရားသညြ ဖနဆြငြးခှငြး၊ လူ့ဇာတိတို့ကို ခံယူတောမြူခှငတြို့တှငြ ပါဝငပြှီး ဥပဇျဈယြ ဆရာလညြးဖှဈတောမြူ၏။
✔️ ကမ်ဘာဦး ၁း၁-၂ ၂း၂၊ ၂ဓမျမ ၂၃း၂၊ လု ၁း၃၅၊ ယော ၁၄း၁၆-၁၈။
? ထာဝရဘုရားသညြ ခပသြိမြးသောအရာတို့ကို ခှောကရြကအြတှငြးဖနဆြငြး၍ သတျတမနေ့၌ ငှိမဝြပစြှာနတေောမြူသညြ။
✔️ က ၁၊၂။ ထှကြ ၂ဝး၈-၁၁၊ ဆာ ၁၉း၁-၆၊ ၃၃း၆၊၉၊ ၁၀၄၊ ဟေ ၁၁း၃။
၇။ The Nature of Humanity (လူ၏သဘာဝဗီဇ)
? ဘုရားသခငသြညြ လူသားကို ခှဲခှားမှုကငြးသော ကိုယြ စိတြ ဝိညာဉြ အဖှဈ မိမိပုံသဏျဍာနတြောအြတိုငြး ဘုနြးတောအြဖို့အလို့ငှာ ဖနဆြငြးရာ၊ လူသညြ ကဆွုံးခှငြးအားဖှငြ့ သခှငြေးတရား အုပစြိုးခှငြး ခံရသောလြညြး နောငတြရသောအပှဈသားသညြ ဖနဆြငြးရှငြ၏ ပုံသဏျဍာနတြောအြတိုငြးအသကရြှငခြှငြ့ပှနရြရှိမညြ။
✔️ က ၁း၂၆ -၂၈၊၂း၇၊ ဆာ ရး၁၅၊ ၅၁း၅၊၁၀၊ ၈း၄-၈၊ က ၃၊ တမနြ ၁ရး၂၄-၂၈၊ရော ၅း၁၂-၁၇။
၈။ The Great Controversy ( မဟာတိုကလြှနပြှဲကှီး)
? ခရဈတောနြှငြ့ စာတနမြရနြတြ တို့အကှား မဟာအငှငြးပှားမှုကှီးတှငြ လူသားမွိုးနှယဆြကအြားလုံးတို့ ပါဝငပြတသြကလြကွရြှိပသညြေ။
✔️ ဗွာ ၁၂း၄၊၉၊ ဟေ ၁၄း၁၂-၁၄၊ ယဇေ ၂၈း၁၂-၁၈၊ က ၃။
၉။ The Life, Death, and Resurrection of Christ (ခရဈတောြ၏ အသကတြာ၊ အသခေံခှငြးနှငြ့ ရှငပြှနထြမှောကခြှငြး)
? ခရဈတောြ၏ အသကတြာ၊အသခေံခှငြးနှငြ့ ရှငပြှနထြမှောကခြှငြးသညြ တဈခုတညြးသော အပှဈဖှရှောဖှဈလကွြ အပှဈနှငြ့သခှငြေးကို နောကဆြုံးအောငမြှငရြနြ အာမခံဖှဈ၏။
✔️ ယော ၃း၁၆ ဟေ ၅၃ ၁ပေ ၂း၂၁ ၂၂ ၁ကော ၁၅း၃ ၄ ၂ဝ ၂၂၊ ၂ကော၅း၁၄ ၁၅၊ ရော ၁း၄၊၃း၂၅ကော ၂း၁၅၊ ဖိ ၂း၆-၁၁။
၁၀။ The Experience of Salvation (ကယတြငခြှငြးသိမှငနြားလညခြှငြး)
? ခရဈတောအြားဖှငြ့ဖှောငြ့မတရြာသို့ရောကြ၍ သားသမီးအဖှဈခံယူပှီးသူ၏ စိတနြှလုံးထဲ၌ ဝိညာဉတြောသြညြ ပညတတြောကြို ရေးသားပေးရာ၊ သနြ့ရှငြးသော အသကတြာနဲ့ နထေိုငရြနြ တနခြိုးကိုလညြးပေးတောမြူသညြ။ ကွောကနြှလုံးအစား၊ အသားနှလုံးပေးကာ၊ ညဈညူးသော အဝတအြစား ဖှူသောဝတလြုံးဆငမြှနြးစမညြေ။
✔️ ၂ကော ၅း၁၇-၂၁၊ ယော ၃း၁၆၊ ဂလာ ၁း၄၊ ၄း၄-၇၊ တိတု ၃း၃-၇၊ ယော ၃း၃-၈၊ ယဇေ ၃၆း၂၅ ၂၇။
၁၁။ Growing in Christ (ခရဈတောြ၌ ကှီးထှားခှငြး)
? စာတနမြာရနြတနြှငြ့ ၎င်းငျးငြး၏တမနတြို့ကို ကိုယတြောသြကတြောထြငရြှားစဉနြှငြ့ လကဝြါးကပတြိုငြ၌ အောငမြှငခြဲ့ပှီး ၊ ကပကြမ်ဘာ အဆုံး၌ အောငပြှဲဆငြဦးမညြ။ ယငြးအောငပြှဲသညြ ကွှနြုပတြို့အောငပြှဲပငြ ဖှဈရာ ကိုယတြောအြား ကယတြငရြှငနြှငြ့သခငအြဖှဈ လကခြံကာ နေ့စဉဆြုတောငြး၊ နှုတကြပတတြောဖြတရြှု၊ သီခငွြးဆို၊ ဝတပြှု၊သာသနာလုပငြနြးတှငြ ပါဝငပြါက ကနွြုပတြို့အတှငြး၌ကိနြးအောငြးသော ဝိညာဉတြောတြနခြိုးကှောငြ့ နတဆြိုးတို့တနခြိုးကို ကှောကစြရာမလိုဘဲ ခရဈတောြ၏ ပှညြ့စုံခှငြးအတိုငြး ကှီးထှားကှမညြ။
✔️ ဆာ ၁း၁-၂၊ ၂၃း၄၊ ကော ၁း၁၃၊၁၄၊ လု ၁ဝး၁၇၊၂၀၊ ဧဖကြ ၅း၁၉၊၂၀၊၁သကြ ၅း၂၃၊ ၂ကော ၃း၁၇၊၁၈၊ ဖိ ၃း၇၊၁၄၊ ဂလာတိ ၅း၂၂-၂၅၊ ရောမ ၈း၃၈-၃၉။
၁၂။ The Church (အသငြးတောြ)
? အသငြးတောသြညြ ယရှေုခရဈ၏ခနျဓာကိုယဖြှဈကာခရဈတောကြိုယတောတြိုငြ ဦးခေါငြးတောလြညြးဖှဈတောမြူရာ သကဝြငယြုံကှညသြူတို့မှာ သတို့သမီးကညာမွားဖှဈကှသညြ။
✔️ ဧ ၄း၁၁-၁၅၊ ၃း၈-၁၁၊ ၅း၂၃-၂၇၊မ ၂၈း၁၉ ၂၀၊ ၁၆း၁၃-၂၀။
၁၃။ The Remnant and Its Missions (ကနွကြှှငြးသောအသငြးတောြ၏တာဝနမြွား)
? ကနွကြှှငြးသောအသငြးတောရြှိ အသငြးဝငတြို့သညြ တရားစီရငခြှငြး စပှီ ဖှဈကှောငြး ယုံကှညြ၍ ကောငြးကငတြမနြ သုံးပါး သတငြးစကားကို ဟောကှားရနြ ခေါတြောမြူခှငြး ခံရသူမွား ဖှဈသညြ။
✔️ ဗွ ၁၂း၁၇၊ ၁၄း၆-၁၂၊ ၁၈း၁-၄၊ ၂၁း၁-၁၄၊ ၂ကော ၅း၁၀။
၁၄။ Unity in the Body of Christ(ခရဈတောြ၌ စညြးလုံးညီညှတခြှငြး)
? အသငြးတောသြညြ လူမွိုး၊ ဘာသာ၊ စကား၊ ယဉကြွေးမှု အတတပြညာ၊ ဆငြးရဲခမွြးသာ၊ ကွားမ ကှဲပှားခှားနားသောလြညြး ထာဝရဘုရားသညြ သုံးပါးပေါငြး တဈဆူ ဘုရားဖှဈသကဲ့သို့ တဈလုံးတဈဝတညြးဖှဈ၏။
✔️ ရော ၁၂း၄၊၅၊၁ကော ၁၂း၁၂-၁၄၊ မ၂၈း၁၉ ၂၀၊ဆာ ၁၃း၃၊ ၁ကော ၃း၁၀-၁၅၊ဧ ၄း၁၄-၁၆၊ယော၁ရး၂၀-၂၃။
၁၅။ Baptism (ရနှဈေခှငြးမငြျဂလာ)
? ရနှဈေခှငြး မငြျဂလာသညြ သမျမာကမွြးစာ ညှနကြှားသှနသြငခြကွနြဲ့ ညီညှတသြညြ။
✔️ ရော ၆း၁-၆၊ ကော ၂း၁၂ ၁၃၊ တမနြ၈း၃၄-၃၉၊ ၁၆း၃၀-၃၃၊ မ ၂၈း၁၉ ၂၀။
၁၆။ The Lord’s Supper (ကိုယတြောြ၏ညစာစားပှဲ(သို့)ပှဲတောမြငြျဂလာ)
? ကိုယတြောြ၏ညစာစားပှဲ(သို့)ပှဲတောမြငြျဂလာ မဝငမြီ ခှဆေေးမငြျဂလာပှဲဝငရြနြ ခရဈတောဘြုရားမိနြ့တောမြူခဲ့သညြ။
✔️ဗွာ ၃း၂၀၊၁ကော ၁ဝး၁၆ ၁၇၊ ၁၁း၂၃-၃၀၊မ၂၆း၁၇-၃၀၊ယော၆း၄၈-၆၃၊၁၃း၁-၁၇။
၁၇။ Spiritual Gifts and Ministries (ဝိညာဉဆြုကွေးဇူးမွားနှငြ့သာသနာလုပငြနြးမွား)
? ဝိညာဉတြောဆြုကွေးဇူးမွားကို သာသနာလုပငြနြးပှီးစီးနိုငရြနြ ထာဝရဘုရားသှနြးလောငြးပေးသနားတောမြူသညြ။
✔️ ရော ၁၂း၄-၈၊ ၁ကော ၁၂း၉-၁၁၊၂ရ ၂၈၊ တမနြ ၆း၁-၇၊ ၁တိ ၃း၁-၁၃၊ ၁ပေ ၄း၁ဝ ၁၁။
၁၈။ The Gift of Prophecy (ပရောဖကပြှုခှငြးဆုကွေးဇူး)
? ဝိညာဉတြောဆြုကွေးဇူးမွားတှငပြါဝငသြော ပုရောဖကပြှုခှငြးဆုကွေးဇူးသညြ ကနွကြှှငြးသောအသငြးတောစြဈမှနကြှောငြး ဖောပြှသညြ့ အမှတလြကျခဏာတဈခုဖှဈသညြ။
✔️ ယောလ ၂း၂၈ ၂၉၊တမနြ ၂း၁၄-၂၁၊ဗွာ ၁၂း၁၇၊ ၁၉း၁၀။
၁၉။ The Law Of God (ဘုရားသခငြ၏ပညတတြောြ)
? ပညတတြောြ ၁ဝပါးသညြ ဘုရားသခငြ၏ မတျေတာတောြ၊ အလိုတောြ နဲ့ လူသားအတှကရြညမြှနြးခကွမြွားကို ဖောပြှသော မိမိစိတတြှငြ ကိနြးအောငြးသော ခရဈတောြ၏တနခြိုးမွားဖှငြ့ စောငရြှောကနြိုငသြညြ။
✔️ထှကြ ၂ဝး၁-၁၇၊ဆာ၄ဝးရ ၈၊ မ ၂၂း၃၆-၄၀၊ တရား ၂၈း၁-၁၄၊မ ၅း၁၇-၂၀။ ဟဗှေဲ ၈း၈-၁၀။
၂၀။ The Sabbath (ဘုရားသခငြ၏ဥပုသတြောနြေ့)
? သတျတမနေ့ဥပုသစြောငြ့ခှငြးသညြ ဘုရားသခငကြို ဖနဆြငြးရှငနြဲ့ ကယတြငရြှငအြဖှဈ အသိအမှတပြှုခှငြးဖှဈ၍ ဘုရားသခငနြှငြ့ မိမိလူတို့စပကြှားတှငြ တညမြှဲသော အမှတလြကျခဏာသကသြဖှဈေ၏။
✔️ ထှကြ ၂ဝး၈-၁၁၊ ၃၁း၁၃-၁၇၊ ယဇေ ၂ဝး၁၂၊၂၀၊ လုကာ ၄း၁၆၊ ဟေ ၄း၁-၁၁။
၂၁။ Stewardship (ဘဏျဍာစိုးဖှဈခှငြး)
? ကွှနြုပတြို့သညြ ဘဏျဍာစိုးမွားဖှဈကှရာ ဆယဖြို့တဈဖို့နဲ့အလှူငှမွေားကို ပေးလှူသညြ့အပှငြ အခွိနြ၊ အခှငြ့အရေး၊ စှမြးရညြ၊ ပဈစညြးဥဈစာ ကိုယခြနျဓာ သယံဇာတ ပဈစညြးမွားကို ဘုရားသခငြ ပိုငဆြိုငကြှောငြးအသိအမှတပြှုကာ အမှုတောနြှငြ့ ဘုနြးတောအြတှကြ အကောငြးဆုံး ထိနြးသိမြးစောငြ့ရှောကြ အသုံးပှုကှသညြ။
✔️က ၁း၂၆-၂၈၊ ၂း၁၅၊ ၅ရာ ၂၉း၁၄၊ ဟဂျဂဲ၁း၃-၁၁၊မာလခိ ၃း၈-၁၂၊ ၁ ကော ၉း၉-၁၄။
၂၂။ Christian Behavior (ခရဈယာနအြသကတြာ)
? ဘုရားသခငြ၏ သားသမီးတို့သညြ သရုပပြကွြ၊ ပကာသနဆနသြောအဝတြ၊ စိနရြှှလကေဝြတရြတနာ တို့ဖှငြ့ မဆငယြငြ။ အရကြ ဆေးလိပနြဲ့ လူကို ထိခိုကစြသေော မူးယဈဆေးဝါးမွားကို သုံးစှဲခှငြး၊ ရောငြးဝယခြှငြးမွားကို ရှောငကြဉွကြာ သမျမာကမွြးစာ၏ဖောပြှခကွအြတိုငြး သနြ့ရှငြးသောအစာမွားကိုသာစားသုံး၍ ဘုရားသခငအြလိုရှိသညြ့အတိုငြး အသကရြှငနြထေိုငကြှသညြ။
✔️ရော ၁၂း၁ ၂၊ ၁ ယော ၂း၆၊ ဧ ၅း၁-၂၁၊ ဖိ ၄း၈၊ ၂ကော ၁၈း၅၊ ၁ ပေ ၃း၁ ၃၂၊ ၃ ယော ၂။
၂၃။ Marriage And the Family (အိမထြောငပြှုခှငြးနှငြ့ မိသားစု)
? တဈလငတြဈမယားစနဈကိုကငွြ့သုံး၍ အိမထြောငမြိသားစု ခစွခြငရြငြးနှီးမှုသညြ ဧဝံဂလေိတရား၏ စံအမှတတြဈခုဖှဈသညြ။
✔️က ၂း၁၈-၂၅၊ မ ၁၉း၃-၉၊၂ ကော ၆း၁၄၊ ဧ ၅း၂၁-၃၃၊ လု ၁၆း၁၈၊ ၁ ကော ရး၁ဝ ၁၁၊ဧ ၆း၁-၄။
၂၄။ Christ’s Ministries in the Heavenly Sanctuary (ခရဈတောြ၏ကောငြးကငဗြိမာနတြောလြုပငြနြး)
? လကဝြါးကပတြိုငတြှငြ တဈကှိမြးတညြးအပှဈဖှရော ယဈအဖှဈပူဇောခြံပှီးနောကြ ခရဈတောသြညြ ကောငြးကငဗြိမာနတြောတြှငြ ယဈပုရောဟိတအြဖှသဆြောငရြှကသြညြ။
✔️ဟဗှေဲ ၈း၁-၅၊ ၄း၁၄-၁၆၊ ၉း၁၁-၂၈၊ ဒံ ရး၉-၂၇၊ ၈း၁၃ ၁၄၊ ဗွာ ၁း၇၊ ၈း၁၄ ၁၄၊ ယဇေ ၄း၆၊ ဗွာ ၁၄း၆-၇။
၂၅။ The Second Coming of Christ (ခရဈတောဒြုတိယအကှိမကြှှလာခှငြး)
? ခရဈတောကြှှလာခှငြးသညြ ဧဝံဂလေိတရား၏ အထှတအြထိပြ မငြျဂလာရှိသောမွှောလြငြ့ခှငြးဖှဈရာ အခွိနနြာရီမသိသောကှောငြ့ အခွိနမြရှေးအဆငသြငြ့ ပှငဆြငနြရေုံမက သူတပါးအားလညြး ထိုမွှောလြငြ့ခှငြးတှငြ ပါဝငနြိုငရြနြ ပှငဆြငပြေးကှသညြ။
✔️မ ၂၄း၄၃ ၄၄၊၁သကြ ၄း၁၃-၁၈၊၁ ကော ၁၅း၅၀-၅၄၊ ၂သကြ ၁း၇-၁၀၊ ဗွာ ၁၄း၁၄-၂၀၊တိ ၂း၁၃။
၂၆။ Death and Resurrection (သခှငြေးနဲ့ ရှငပြှနထြမှောကခြှငြး)
? မညသြူမွှ ငရဲသို့မရောကသြေးပေ။အခွို့မှလှဲ၍ ကောငြးကငသြို့မရောကသြေးပေ။ ခရဈတောကြှှလာတောမြူသောအခါ သလှနေပြှီးသော သနြ့ရှငြးသူတို့ထမှောကြ၍ အသကရြှငနြသေောသနြ့ရှငြးသူတို့နဲ့တကှ မိုးတိမပြေါသြို့ ခွီဆောငခြှငခြံရမညြ။
✔️ရော ၆း၂၃၊ ၁တိ ၆း၁၅ ၁၆ ယော ၁၁း၁၀-၁၄၊ ကော ၃း၃ ၄၊ ၁သကြ ၄း၁၃-၁၇။
၂၇။ The Millennium and the End of Sin (နှဈတဈထောငနြှငြ့ အပှဈ၏နိဂုံးခွုပြ)
? ဖှောငြ့မတသြောသူမွားသညြ ခရဈတောနြဲ့အတူ အနှဈတဈထောငြ စိုးစံပှီးနောကြ မဖှောငြ့မတသြောသူမွားရှငပြှနထြမှောကလြာကာ သူတို့ကို လှညြ့ဖှားသော စာတနမြာရနြတနြဲ့အတူ ငရဲမီးဖှငြ့ မီးရှုဖကွစြီးခှငြးခံရမညြ။
✔️ဗွာ ၂၀။၁ကော ၆း၂၊၃၊ ယေ ၄း၂၃-၂၆၊ဗွာ ၂၁း၁-၅၊ မာလခိ ၄း၁၊ ယဇေ ၂ဝး၁၈ ၁၉။
၂၈။ The New Earth (ကမ်ဘာသဈ)
? သနြ့ရှငြးသူမွားသညြ ကောငြးကငတြှငြ နှဈပေါငြးတဈထောငသြာ စိုးစံကှပှီး ကမ်ဘာသဈ၌ခရဈတောအြတူ ထာဝရကာလပတလြုံး စိုးစံရကှမညြ။
✔️ ၂ပေ ၃း၁၃၊ဟေ ၃၅၊ ၆၅း၁၇-၂၅၊ မ ၅း၅၊ ဗွာ ၁၁း၁၅၊ ၂၁း၁-၇၊၂၂း၁-၅။
Prev post Donation History